वाम गठबन्धनको चुनावी चुर्तिफुर्ती सेलायाे ! – Everest Dainik
वाम गठबन्धनको चुनावी चुर्तिफुर्ती सेलायाे !
चुनावताका लाग्थ्यो वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने परिणाम आउँदा बित्तिकै देशमा उथलपुथल हुन्छ ।
चुनावी परिणाम पनि आयो, वामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाए पनि, तर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका कारण सरकार गठनमै लामो समय लाग्यो । बल्ल बल्ल सरकार बन्यो तर गति सुस्त ।
दुई तिहाई पुर्याउने कोसीसमा मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सहभागिता खोज्दा नयाँ सरकार बनेको तीन हप्ता भैसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद सात सदस्यीय छ । मन्त्रीपरिषलाई पुर्णता दिन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालिसक्यो ।
“अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।”
निर्वाचन भएको लामो समयपछि बल्ल सरकार बनेको र त्यसमा पनि मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिनेबारेकै छलफलमा रुमल्लीँदा आम जनता निराश छन् । तर आजै भोलि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउने दावी सत्तापक्षको यथावत छ ।
कहाँ अड्कियो मन्त्रीपरिषद विस्तार
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नामावली तयार गरिसकेका जनाइएको छ । तर सरकारले पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन् । कुरा अड्किएको मधेस केन्द्रित दल संघिय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सरकारमा सहभागिताको बिषयले हो ।
संयीय समाजवादी फोरमले माग गरे झै उपप्रधान सहित तीन वटा मन्त्रालय र उपसभामुख दिन वाम गठबन्धन तयार भैसकेको छैन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहन्छन् । उनलाई उपप्रधान चाहिएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन उनलाई तीन वटा मन्त्रालय चाहियो । साथमा उनको अर्को माग छ उपसभामुख पनि दिनुपर्छ । यी बिषयमा निरन्तर छलफल भएपनि ठोस निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन् । तर सहमती नजिक भनेर भनिएको छ ।
बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झै सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने जस्ता प्रावधिक बिषयमा आलटाल गरिरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यहि कुरा सरकारमा जान खाेजीरहेका तर अाफ्नाे माग अनुसर नै सबै हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि ख्याल गरुन ।
फोरम नेपाल आफुले मागे अनुसार सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय सहित उपसभामुख दिने सहमती भए दुई वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत पनि भएको छ । यी बिषयमा उपेन्द्र यादवले पदाधीकारीको आकस्मीक बैठक बोलाएर छलफल समेत गरेका छन् ।
सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वामगठबन्धनसंग फोरम नेपालको सहमती भेसकेको छ । लिखित गर्नेमा मात्र अड्किएको हाे । उनले भने “सहमती भएका बिषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठुलो नभएपनि लिखित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । यो बिषयमा छिट्टै सहमती हुन्छ । ”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।”
के भन्छन बौद्धिक बर्ग
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन् “चुनावी तामझाम अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि वाम गठबन्धनको सरकार सुस्त भयो । मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अलमल गरेर आफैँ आलोचित हुने काम सरकारको नेतृत्वले गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।”
सरकार बनेको तीन हप्ता मात्रै भयो, याे बिचमा जनताले धेरै ठुलो आशा गरेका थिएनन । तर कम्तिमा सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाईसकेर कार्ययोजना निमार्णमा लागनुपर्नेमा सरकार विस्तारको अलमल कायमै छ। कस्ता मन्त्री आउने हुन, कस्तो नीति लिने हो भन्ने शंका मात्रै रहँदा सबै क्षेत्र स्थिर हुनु स्वभाविक हो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । सोमवार सार्वजनिक एक कार्यक्रममा उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।”
केन्द्र सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्व समेत आफुअनुकुल भएकाले वर्तमान सरकारलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न अनुकुल वातावरण बनेको छ । यस्तो महोलको सदुपयोग जति छिटो र धेरै गर्न सक्यो यो सरकारको लोकप्रियता उति बलियो हुने सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव छ । राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन् “सहि समयको सहि सदुपयोग गर्न सकोस वर्तमान सरकार र केपी शर्मा ओलाीलाई मेरो यहि सुभकामना छ ।”
ट्याग्स: Left Unity, raghunath bajagain